I-Specdrums, indlela enobuchule kakhulu yokubeka isingqisho kwiminwe yakho | Iindaba zeGajethi
Guqula imibala ibe zizandi uze wenze eyakho ingoma. Le yinjongo ye Iimpawu ezithile, amakhonkco athile aqhagamshelwe kwifowuni ephathekayo kwaye emva kokucofa ngaphezulu, uncuthu lwengoma luya kuqala ukukhala. Lumka, yonke into ivakala ilungile, kodwa kuya kufuneka uhlale ukhumbula ukuba kuya kufuneka uyenze kancinci kwaye uyile ngokwenyani.
I-Specdrum yiprojekthi onokuyixhasa ngezemali ngeqonga elidumileyo le- crowdfunding Kickstarter. Kwaye ixabiso layo liqala kwi- $ 39 (ngaphantsi kwama-euro angama-35 kwizinga lokutshintshiselwa langoku). Kodwa makhe sijonge ngokweenkcukacha ukuba le projekthi inantoni.
Inokuchazwa njenge ukuvela kweekhibhodi ze-MIDI zangoku. Ukongeza, ukuthuthwa kwayo kukhaphukhaphu kwaye kulula: ufuna kuphela iselfowuni (okwangoku i-iPhone) okanye ikhompyuter ye-Mac okanye ye-Linux- kwi-Android nakwiWindows akukho datha ithile. Kwaye, ewe, ikhibhodi enemibala ukuze amakhonkco aziqonde izandi ekufuneka bezenzile.
Abavelisi beprojekthi babeka ikhibhodi enemibala eyahlukeneyo eyi-12, nangona sele becebisa ukuba ungayenza kwaye uyifake umbala. Nje ukuba ulungele ikhibhodi, kuya kufuneka ukhulule ubuchule bakho kwaye ubone ukuba yintoni enokuvela kwiminwe yakho. Ngokunjalo, kwaye njengoko sele sibonisile, oku I-Specdrum isebenza ngokungathi yeyikhibhodi / isilawuli se-MIDI: Ungakhupha izandi ezahlukeneyo: igubu, isiginci, ipiyano, amalungu, njl. Kwelinye icala, ii-Specdrums ziya kukuvumela ukuba urekhode indalo yakho kwaye ube nakho ukubeka amanyathelo akho kuphindaphindo de ube uyakwazi ukwenza umculo opheleleyo.
Ukongeza ekugxileni kwiimvumi nabathandi bomculo, ingabonakaliswa kwimfundo. Kwaye ukuba uyilo olufana neeSpecdrum kwigumbi lokufundela lunokwenza ukuba abantwana banike inkululeko yokuyila kunye nengcinga yabo. Kodwa ngaphezulu kwako konke, onwabele umculo ngendlela emnandi ngakumbi yokusebenzisa ubuchwephesha obutsha.
Iinkcukacha ezithe vetshe: iphepha leprojekthi elisemthethweni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Specdrums, indlela enobuchule kakhulu yokubeka isingqisho kwiminwe yakho
Isikrini esizilungisayo sinokuba yinyani kungekudala ngenxa yeMotorola